Dawo Sawiro Sida Loo Kala Badiyay Horyaalka Premier League. – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaDawo Sawiro Sida Loo Kala Badiyay Horyaalka Premier League.
Dawo Sawiro Sida Loo Kala Badiyay Horyaalka Premier League.
Kooxda Liverpool ayaa guul muhiim ah ka gaartay kulankoodii Xalay oo ay fooda is dareen Manchester City oo dooneysay in ay sii dheereysato hogaanka Premier League.
Liverpool ayaa 4-1 ugu awood sheegatay kulan ay marti u ahayd Man City, waxaana goolasha u dhaliyay Coutinho, Firmino iyo Skrtel iyo sidoo kale daafaca reer France Mangala kaas oo City ka dhaliyay goolka furitaaka.
Guuldaradaan kusoo gaartay gurigeeda waa tii ugu xumeyd tan iyo sanadii 2012, markaas oo ay Aston Villa 4-2 ku suldaartay kulan ka dhacay gurigooda.
Manchester City oo kaliya ma ahayn kooxaha Xalay guuldarada la soo deristay kooxda Arsenal ayaa loogaga badiyay 2-1 kulan ay wada ciyaareen naadiga West Brom Allbion.
Hase ahaatee waxaa goolka la hormartay kooxda Arsenal balse naadiga West Brom ayaa barbaro helay, waxana guusha ay saddexda dhibcood ka urursadeen u sabab noqday Arteta oo kooxdiisa gool ka dhaliyay.
Arsenal ayaa goolka ay dhalisay waxaa daqiiqadii 28aad u dhaliyay weeraryahankooda Olivier Giroud,balse daqiiqadii 35aad ayaa James Morrison kooxdiisa West Brom goolka barbaraha ah u dhaliyay.
Kulan kale oo xiise lahaa ayaa waxaa fooda is daray Chelsea iyo Norwich City iyadoo Chelsea guuldaro isdabajoog ah la kulmeysay. Hase yeeshee ciyaartan ayaa gool uu u dhaliyay Diego Costa waxa ay ku heshay saddex dhibcood. Sidoo kale Costa ayaa ka baxay abaartii ka haysay goolal la’aanta isagoo 603 daqiiqo aan wax gool ah dhalin. Tababare Mourinho ayaa waxaa uu u ahaa kulankan mid niyada u qaboojiyay maadaama uusan kulamadii ugu dambeeyay isagoo faraxsan garoonka ka soo bixin.
Kooxda Man United ayaa iyadana guul ka gaartay kulankeeda shalay galab kadib markii ay 2-1 ugu awood sheegatay kooxda Watford. Goolka hore ayaa Man United waxaa u dhaliyay Memphis Depay, balse rigoore ay heshay Watford ciyaarta oo ka dhiman saddex daqiiqo ayaa niyad jab ku abuuray, hase yeeshee daqiiqadii 90aad ayaa kooxda Watford dhibicdii ay heli lahayd isu qoonsatay kadib markii uu gool iska dhaliyay kooxdiisa Troy Deeney, waxayna ciyaarta ku soo idlaatay 2-1 oo ay kooxda Man United guul ku gaartay.
Hogaanka Premier League ayaa waxaa la wareegtay kooxda Leicester City oo leh 28dhibcood halka Manchester United ay kaainta labaad la fadhido 27 naadiyada Man City iyo Arsenal ayaa wada leh min 26 dhibcood.
Kulamadii kale ee la ciyaaray horyaalka Premier League ayaa natiijooyinkoodu waxa ay noqdeen sidan; Everton 4 – 0 Aston Villa, Newcastle United 0 – 3 Leicester City, Southampton 0 – 1 Stoke City, Swansea City 2 – 2 AFC Bournemouth.